Inter Press Service News Agency: This online outburst by Buddhists inside the country and in the diaspora, “openly asserting that action tantamount to genocide is acceptable | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Myanmar Government need to ARREST all the RADICAL HARDLINERS immediately as HATE CRIMES continue today in Myanmar proper on Muslims »
Sourse: MMSY-ပဉ္စသိင်္ခ့ စောင်းကြိုးပြတ် (အပိုင်း ၂ )
အပိုင်း ၂ မှာ ကျွန်တော်တို့ သတင်းတွေဆီမသွားမီ တွေ့ရကြုံတာလေး ဖောက်သည်ချပါရစေ။ အပိုင်း ၁ ကို ရေးတော့ ပုဂ္ဂလခံစားချက်လေးများရှိနေပေမယ့် မီဒီယာတို့ လိုက်နာအပ်တဲ့ စည်းကို မကျော်လွန်ခဲ့ဘူး၊ တနည်း yellow journalism မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။
ဒီအပိုင်း ၂ မှာတော့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး နိုင်ငံတကာဝေဖန်ထားမှုတွေပါ ထည့်ရေးထားတာမို့ ပြည်တွင်းမီဒီယာက ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချို့အချက်တွေကို ကိုးကားပါ့မယ်။
တဆက်တည်းသိစေချင်တာက ဒီဆောင်းပါးက မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တဘက်တည်းက ရပ်ပြီး advocate လုပ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပါ။ အမှန်တရားကိုတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြသွားမှာပါ။
Nicholas Farrelly ဆိုသူကိုတော့ အပိုင်း၁ မှာ သိထားကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ သူက သြစလျေးအမျိုးသား တက္ကသိုလ် က အရှေ့တောင်အာရှအရေး ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးပါ။ asiapacific.anu.edu.au မှာ တင်ထားတဲ့ Intolerance, Islam and the Internet in Burma today ခေါင်းစဉ်ပါ ဆောင်းပါးမှာ Nicholas ကိုယ်တိုင် မှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်း အပိုင်း ၁ မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ သူ့မှတ်ချက်မှာ Nicholas ရည်ညွှန်းပေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးကိုလည်း အေအက်ဖ်ပီကတဆင့် ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးကိုတော့ http://goo.gl/x1p0Q မှာသွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Nicholas က သူ့ပရိသတ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်(စာရေးသူ) ဆီ ပေးပို့ခဲ့တဲ့ ၁၄ ရက် ဇွန်လ နေ့စွဲပါမေးလ်မှာ ဒီလိုရေးသားပေး ထားပါ တယ်။ Sad days, I’m afraid. There will beaneed for Burma’s online community to play some role in healing the wounds. There has been too much nastiness, to my mind.
မြန်မာပြန် – “ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ၀မ်းနည်းဖွယ်နေ့စွဲများပါ။ မြန်မာအွန်လိုင်းအစုဝေးအနေနဲ့ ဒီဒဏ်ရာများကို ကုစားဖို့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖွင့်ရန် လိုအပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတော့ စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာမှုတွေ ပြည့်နှက်နေ ပါတယ်။”
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ရော၊ စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာမှုတွေ ပြည့်နှက်နေပါသလား။ အွန်လိုင်းအစုအဝေးအတွက် နစ်ကိုလပ်စ်ပေးသွားတဲ့ အကြံကို အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ပါ့မလား။ စိုးရိမ်စရာအနေအထားအဖြစ် ရှိနေဆဲပါ ဒေါက်တာနစ်ကိုလပ်စ်ခင်ဗျား။
အခုကျွန်တော်တို့ “မှန်မှန်ကန်ကန်သွားရင်းနဲ့ ရောက်သွားခဲ့တဲ့ လမ်းမှားကြီး” ကို ပြန်သုံးသပ်ကြတာပေါ့။
မှန်မှန်ကန်ကန်သွားရင်း ဒို့ လမ်းမှားထဲ ရောက်ခဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့ အခု အလ်ဂျဇီးရားရဲ့အခြားသတင်းဆောင်းပါး တစ်ခုကို ဆက်လက်သုံးသပ်ပါမယ်။ ခေါင်းစဉ်ကတော့ “Top UN envoy in unrest-hit western Myanmar” ၊ “ကုလထိပ်သီးခေါင်း ဆောင်များ မအေးမချမ်းဖြစ်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရောက်ရှိ” ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဗီဂျေးနမ်ဘီယာ တစ်ယောက် မြန်မာပြည်ရောက်လာတဲ့ အကြောင်း ရေးထားတာပါ။ Vijay (ဗီဂျေး) တစ်ယောက် မြန်မာပြည်ထဲရောက်ရင် ဘယ်လိုများ ဖြစ်လိမ့် မလဲဆိုတာ စိုးရိမ်ခဲ့မိပါတယ်။ ဗီဂျေးကို ဗီဂျေးလို့မြင်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်ကလို အုပ်စုလိုက် ဆဲဆို ကြရင် ခက်ရချည့်ရဲ့ပေါ့။
သောမတ်စ်ဖူလာ ၊ ကမ္ဘာ့သတင်းစာဆရာ
အခုတဖန် ကျွန်တော်တို့ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ နံပါတ်တစ်လို့ပြောနေကြတဲ့ မီဒီယာကြီးကိုယ်တိုင် ကန့်ကွက်ခဲ့ရတဲ့ နယူးယောက်တိုင်းမ်စ် သတင်းစာဆရာ သောမတ်စ်ဖူလာဆီ ဦးတည်ကြပါမယ်။
သောမတ်ဖူလာက ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ နယူးတိုင်းမ်စ်သတင်းစာမှာ “Crisis in Myanmar Over Buddhist-Muslim Clash” (http://goo.gl/xvhzn) ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးသားခဲ့တာပါ။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ အမ်အမ်အက်စ်ဝိုင်မီဒီယာက “Crisis in Myanmar Over Buddhist-Muslim Clash (ဘာသာပြန်) ” (http://news.mmsy.info/news/3440) ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အလဲဗင်းမီဒီယာကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အချက်က –
မြန်မာပြန် – “တစ်ဘက်မှာတော့ ပုဂ္ဂလခံစားချက်တွေက အတော်ကလေးမြင့်တက်နေခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အပတ်စဉ်သတင်းစာထုတ်ဝေတဲ့ ဦးဆောင်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ အလဲဗင်းမီဒီယာ အုပ်စုကတော့ သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ မွတ်စလင်မ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မုန်းတီးခက်ထန်လှတဲ့ စာဖတ်သူများထံက မှတ်ချက်တွေကို တသီတသန်းကြီး ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မောင်ဖိုးဆိုသူက – “အကြမ်းဖက်သမားဟာ အကြမ်းဖက်သမားပဲ၊ သူတို့ကို သတ်ပြစ်” လို့ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။” (သောမတ်စ်ဖူလာ နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်)
အဲဒီရေးသားချက်ကို ကိုးကားပြီး မြန်မာ့နံပါတ် ၁ မီဒီယာကြီးက အောက်ပါအတိုင်း(အယ်ဒီဒါအာဘော်ကို ဖော်ပြပြီး) ပြင်းပြင်းထန်ထန် (Strong Objection) ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။
“His articles on democratic transition in Myanmar are negative. The editors of The New York Times should examine his articles carefully. We do not write about religion or race. We are reporting the news covered by our reporters on the scene to prevent undesirable outcomes due to inaccurate coverage of the riots by foreign media. Atatime like this, we cannot accept such kind of criticism. It may cause misconceptions about the EMG among our international readers. We object to Thomas Fuller and the board of editors of The New York Times,” said Chief Editor Wai Phyo of the Weekly Eleven News Journal.”
မြန်မာပြန် – “သောမတ်စ်ဖူလာရဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲအပေါ် ရေးသားချက်တွေမှာ negative တွေ များနေတယ်။ သည်နယူးယောက် တိုင်း(မ်)စ် သတင်းစာအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ရေးသားမှုတွေကို သေသေချာချာ စိစစ်ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးတွေကို ဦးတည်ထားတာ မရှိပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာ ပြည်ပမီဒီယာတချို့ရဲ့ လွဲမှားတဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကြောင့် မလိုလားအပ်တာတွေ မဖြစ်အောင် အချိန်နဲ့အမျှ သတင်းမှန်တွေကို အခင်းဖြစ်ပွားရာဒေသတွေမှာ ရှိနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သတင်းထောက် တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖော်ပြနေပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ Eleven Media Group ကို ဝေဖန်ရေးသားတာက လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူး။ နိုင်ငံတကာ စာဖတ်ပရိသတ်တွေက အထင်အမြင် လွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စအ တွက် သောမတ်စ်ဖူလာနဲ့ သည်နယူးယောက်တိုင်း(မ်)စ် သတင်းစာ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကို ကန့်ကွက်ပါတယ်”ဟု Weekly Eleven News Journal ၏ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဝေဖြိုးက ပြောကြားခဲ့သည်။ (EMG မြန်မာပြန်မှ)
တကယ်တန်းဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သောမတ်စ်ဖူလာက အလဲဗင်းကို ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖော်ပြနေပါတယ်လို့ ဘယ်နေရာမှာမှ စွပ်စွဲထားတာမျိုး မရှိဘဲ အလဲဗင်းအနေနဲ့ သတင်းတင်ပြချက်တိုင်းမှာ မှတ်ချက် ပေးနေကြတဲ့ လူရမ်းကားများကို ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိဆိုတာကိုသာ မီးမောင်းထိုးပြခဲ့တာပါ။ အလဲဗင်းက ဘာကို sensitively (ထိလွယ်ခိုက်လွယ်) ခံစားပြီး အရှိုက်ထိသွားလည်းဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မသိပါ။ သို့သော် တုန့်ပြန်ရေးသားလိုက်ပုံက –
“The EMG has allowed its readers to comment on the riots with complete freedom to reflect the public opinion over the latest developments in Rakhine State on its website.”
မြန်မာပြန် – “Eleven Media Group အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေများ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အများပြည်သူ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့၏၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် သတင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ comments များကို လွတ်လပ်စွာရေးသား ခွင့်ပြုထားပါသည်။” (EMG မြန်မာပြန်မှ)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ကန့်ကွက်ချက်မှာ EMG က လူထုကို complete freedom ပေးထားတာပါလို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အလဲဗင်းမီဒီယာဂရုပေးထားတဲ့ လုံးဝလွတ်လပ်တဲ့ ရေးသားမှတ်ချက်ပေးခွင့်ဆိုတာ ဘာများပါလဲ။ အကျိုးတူပြိုင်ဘက် The Voice Weekly ကတော့ ဒီလိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။
From The Voice Weekly Facebook Page
သောမတ်ဖူလာက သူ့ဆောင်းပါးမှာ အလဲဗင်းပေ့ခ်ျ စာဖတ်သူတစ်ဦး ပေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ကိုခုလိုကိုးကား ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒါတွင်မကသေးဘဲ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာတော့ သောမတ်စ်ဖူလာက နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်မှာပဲ “Internet Unshackled, Burmese Aim Venom at Ethnic Minority” (http://goo.gl/4qDK8) ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆောင်းပါးရေးပါတယ်။
တတ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ ဟိရီသြတ္တပ္ပတရား လက်ကိုင်ထားသူများအဖို့ တကယ့်ကို ရှက်ဖွယ်လိလိပါပဲ။ “အင်တာနက်ပေါ်က လက်ထိပ်မခတ်မှု : (တနည်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ သောင်းကျန်းချင်တိုင်း သောင်းကျန်းပြီး ဘယ်သူကမှ အရေးမယူတဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားဖော်ပြပိုင်ခွင့်) မြန်မာတွေက လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေကို အဆိပ်တွေနဲ့ (ပစ်ပေါက်ဖို့) ချိန်ဆထားခြင်း” ဆိုပြီး ပြန်ဆိုနားလည်နိုင်ပါတယ်။ သောမတ်စ်တင်ပြထားတာက
……..hateful comments are also flourishing online aboutaMuslim ethnic group, the Rohingya, …….
မြန်မာပြန် – …. မွတ်စလင်မ်ဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အမုန်းတရားကြီးမားတဲ့ မှတ်ချက်တွေက အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ တဖန်တင်ပြတာက –
“When the discovery ofa“Rohingya body” was announced Thursday on the Facebook page of the Eleven Media Group, one of the largest private media organizations in Myanmar, one reader, Pyaephyo Aung, wrote that he had been “waiting for this kind of news foralong time.” Another reader, Ko Nyi, usedaracial slur and said, “It’s not even enough that he is dead.””
မြန်မာပြန် – ကြာသပတေးနေ့က ရိုဟင်ဂျာ(အလောင်း)တစ်ခုတွေ့တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိ ကမီဒီယာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အလဲဗင်းရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ခ်ျမှာ ကြေညာထားပါတယ်။ အဲဒိအပေါ်မှာ စာဖတ်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပြည့်ဖြိုးအောင်ဆိုသူက “ဒါမျိုးသတင်းတွေကို စောင့်နေတာကြာပေါ့။” လို့ရေးသား ခဲ့ပြီး တစ်ခြားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုညီဆိုသူက လူမျိုးရေးခွဲခြားနှိမ့်ချတဲ့ စကားလုံးကိုသုံးပြီး “သူသေသွားတာ လောက်နဲ့ မလုံလောက်သေးဘူး” လို့ မှတ်ချက်ပေးထားခဲ့ကြပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်မှာ သောမတ်စ်တင်ပြထားပြန်တာက –
When the Eleven Media Group reported Thursday thatawoman’s corpse was spotted floating inariver, but did not disclose the ethnicity of the victim, one reader said he was confused. “I don’t know if I should be happy or sad,” he said, “because I don’t know what nationality she is.”
မြန်မာပြန် – ကြာသပတေးနေ့က ဘယ်လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ ခွဲခြားမဖော်ပြထားတဲ့ အမျိုးသမီးအလောင်းတစ်ခု ရေထဲမြောပါလာတာကို အလဲဗင်းက သတင်းဖော်ပြတော့ စာဖတ်သူတစ်ဦးက သူ့နေနဲ့ “ဒီမိန်းမက ဘယ်လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာ မသိတော့ ပျော်ရမလား ၀မ်းနည်းရမလားဝေခွဲမရ” ဖြစ်နေတယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အလဲဗင်းရဲ့ ကန့်ကွက်ချက်အပြီးမှာတောင် သောမတ်စ်က အလဲဗင်းကိုချည့်ကိုးကားကာ ဆောင်းပါးတွေ ဆက်ရေးနေတော့ သာသနာရေးခုတုံးလုပ်တယ်လို့ စွပ်စွဲထားခြင်းမရှိပဲ အလွန်တရာ စပ်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ (အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မြန်မာမွတ်စလင်မ်များနဲ့ အစ္စလာမ်သာသနာတော် ကိုပါ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ပတ်ရမ်းနေခဲ့တဲ့) မှတ်ချက်များကို တာဝန်ယူနိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့ ထောက်ပြဝေဖန်ထား တာကို ခုတ်ရာတစ်ခြား ထိရာတစ်ခြားဖြစ်နေတဲ့ အလဲဗင်းရဲ့ ကန့်ကွက်ချက်က နိုင်ငံတကာမှာအရာ မထင်ဘူး ဆိုတာ တွေ့ရှိရတယ်လို့ သုံးသပ်မိကြောင်း ရိုးသားစွာတင်ပြအပ်ပါတယ်။
အခုတဖန် သောမတ်စ်ရဲ့ ရေးသားချက်တစ်ခုကို ကောက်နုတ်တင်ပြပါ့မယ်။ အပိုင်း ၁ ၊ နိဒါန်းပိုင်းမှာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့သလိုပါပဲ။ စိတ်ခံစားမှုကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး တသက်လုံးအောင်းထားခဲ့ရတဲ့ ၊ မြိုသိပ်ထားရတဲ့ ကိစ္စတွေကို အကာအကွယ်တစ်ခုယူပြီး အန်ထုတ်နေကြတဲ့ အပုတ်အံဖတ်တွေ၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပြန် တဲ့ အသေအပျောက်၊ အပျက်အဆီးစာရင်းထွက်အပြီးမှာတောင် ပုတ်ခတ်နေသေးသူများအတွက် မိမိတို့ဦးနှောက်ကို ခေတ္တခဏလေး အသုံးပြုကြဖို့ သောမတ်စ်ရေးသားခဲ့တာက –
……..according to the United Nations, the government has allowed many of them to vote, including in the country’s first elections after military rule, in 2010.
မြန်မာပြန် – ကုလသမ္မဂ (အစီရင်ခံစာများ) အရ အစိုးရက သူတို့ကို နိုင်ငံတော်ရဲ့ စစ်အုပ်ချူပ်ရေးအပြီး ပထမဆုံးရွေး ကောက်ပွဲ (၂၀၁၀) မှာ ဆန္ဒမဲပေးခွင့် ပြုခဲ့ပါတယ်။ (သောမတ်စ်ဖူလာ၊ နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်)
(ရည်ညွှန်းချက် – http://goo.gl/X4ajB )
အခုတစ်ခါ နာမည်ကြီး ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့ တင်ပြမှုများဆီ သွားပါမယ်။
ရိုက်တာရဲ့ “Violence tests Myanmar’s media, and its censors” (http://goo.gl/6nWsH ) မှာ မွတ်စလင်မ် ၁၀ ဦး ရိုက်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးရေးသားထားတာက –
မြန်မာပြန် – …………..အမည်မဖော်လိုတဲ့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် အယ်ဒီတာတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီဆူပူသောင်းကျန်း မှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒေသတွင်းမီဒီယာပမာဏ အလွန်နည်းနည်း ကလေးကသာ သတင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
မွတ်စလင်မ်အပြစ်မဲ့ ၁၀ ဦး အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စကို ရိုက်တာက “Buddhist vigilantes kill9Muslims in Myanmar violence” ၊ ဘာသာရေး မုန်းတီးမှုအခြေခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက မွတ်စလင်မ် ၉ ဦးကို မြန်မာပြည်တွင်း တိုက်ခိုက်မှု၌ သတ် ဖြတ်” လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အခုတစ်ခါ International crisis group ၊ အဆိုပြုခဲ့တဲ့ အချက်များထဲက နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကို လေ့လာပါ့မယ်။ (http://goo.gl/thPEY)
….. and provide an alternative to the irresponsible, racist, and inflammatory language circulating in recent days via various social media platforms over the Internet.
မြန်မာပြန် – ဒီလို တာဝန်ယူမှုကင်းမဲ့နေတဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ မီးလောင်ရာလေပင့် ဒေါသအမျက်ကို ပိုဆွပေးတဲ့ စကားလုံးတွေ မကြာသေးမီရက်များက အင်တာနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ ပျံ့နှံ့နေတာတဲ့ ပတ်သတ်ပြီး (အစိုးရအနေနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့) အခြားနည်းလမ်းတစ်ခု ထုတ်ပေးရပါမယ်။ လို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
တဖန် http://asiancorrespondent.com မှာ ဂျာနယ်လစ် ဖရန်စစ်ဝိတ်ဒ်ရေးသားခဲ့တာက – “မြန်မာပြည်မှာ အရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ အန္တီမွတ်စလင်မ်အဖျားဝေဒနာအရ ဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင်တော့ အင်တာနက်ကြီးဟာ ဆဲရေးတိုင်းထွာမှုတွေ ခါးသီးမှုတွေနဲ့ လျှော်ဖွတ်ခံနေရပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်မနေ့က ရေးသားခဲ့တဲ့ အလ်ဂျဇီးယားက ဆောင်းပါးမှာတင် မှတ်ချက်ကွန်မန့်ပေါင်း ၁၅၀ ရှိနေပါပြီ။ ဒါက အငြင်းအခုန်က ဘယ်လိုတာသွားနေသလဲဆိုတာနဲ့ပတ် သတ်ပြီး ကောင်းမွန်လှတဲ့ ပြတင်းလေးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခြေခံနည်းနာများ၊ အချက်အလက်များကို အခြေခံတဲ့ အငြင်းအခုန်မျိုး မရှိဘူးဆိုတာကတော့ လုံးဝထင်ရှားနေပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးသူများထဲမှာ မြန်မာပြည်က အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြင်လည်ဖူးသူတွေ ပါနေတာတောင် မှတ်ချက်အများစုကတော့ ကွယ်ဝှက်နေတဲ့ပြဿနာရပ်ကို ထက်ထက်မြက်မြက်ဖြည်မထုတ်ဘဲ သူတို့ရဲ့ အတွင်းအဇ္ဈတကို ဖော်ပြနေသလိုပါပဲ။” (http://news.mmsy.info/news/3481)
Inter Press Service News Agency ကတော့ ဒီလို ရေးသားထားပါတယ်။ (http://goo.gl/rIfHs)
Tags: Asia, Buddhism, Burma, Muslim, Myanmar, New York Times, Rakhine State, Thomas Fuller
This entry was posted on June 19, 2012 at 6:40 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.